Ntuziaka mbido LucidPix - Otu esi eji LucidPix
Anyị agbasiwo mbọ ike iji mee ka LucidPix kachasị mfe iji 3D okike okike, na-edezi ma na-ekesa ngwa dị na iOS na gam akporo. Ndụmọdụ ndị a na usoro ndị a site na ntuziaka mmalite a ngwa ngwa ga-enyere gị aka ịma otu esi eji ngwa anyị, na-enye gị ohere ịghọ onye LucidPix pro na oge!
Nav Ndenye: download • Banye • gallery • Mepụta Foto 3D • Foto Ọkpụkpọ • Hazie foto 3D gị • Kekọrịta foto gị 3D • Nwee anụrị
NDMỌD # # 1: Budata LucidPix
Younwere ike ibudata ma wụnye LucidPix na akwụghị ụgwọ ọ bụla site na Apple App Store na Google Play Store.
Ngwa ahụ ga-arụ ọrụ na ọtụtụ smartphones enwere ugbu a, gụnyere iPhone 6 ma ọ bụ nke ka mma, na-agba iOS 11.1 ma ọ bụ nke ọhụụ, yana ngwaọrụ gam akporo na-arụ gam akporo 5.0 ma ọ bụ nke ọhụụ. Ọ bụrụ na ị bụghị teknụzụ ọzụma: ọ bụrụ na ị zụta ekwentị gị n’ime afọ ise gara aga, ohere ọ ga-abụ na LucidPix ga-agba ọsọ na ya.
Nke 2: Banye
Site na ịbanye na LucidPix, ị ga - enwe ike ịchekwa foto 3D gị niile n'otu ebe, lelee ha na ekwentị mkpanaka gị ma ọ bụ na weebụsaịtị anyị, yana isonye na LucidPix 3D Community site na mmasị, ịza ajụjụ na ịkekọrịta nnukwu foto 3D na ndị enyi na ezinụlọ. Anyị na-akwado ugbu a Facebook na Google iji banye na ngwa anyị, nke pụtara na ịkwesighi ịmepụta akaụntụ ọhụrụ iji jiri ngwa ahụ.
Banye na LucidPix
Ọ bụrụ na ịchọghị ịbanye, ị ka nwere ike iji LucidPix site na ịhọrọ Gaa n’ihu dika ọbịa nhọrọ.
NDMỌD # # 3: Lelee LucidPix osisi
Mgbe ịbatara n’ime ngwa ahụ, a na-eduzi gị na ọdụ osisi LucidPix. Chee echiche dika nke ulo gi, dika TikTok diri gi peeji ma obu ihe oriri gi. Nke a bụ ebe ị ga - ahụ posts ndị na - ewu ewu nke ndị ọrụ LucidPix ndị ọzọ na ndị mmadụ ị na - eso, na ebe ị nwere ike ịkekọrịta 3D nke gị.
Ihe ngosi 3D nke LucidPix
Enwere ike ịpinye foto 3D ndị a n'otu ikiri ihuenyo zuru oke. Gbaa mbọ hụ na ị ga-agagharị ekwentị gị ka ị lee ebe niile.
Enwere onwe gị dị ka foto 3D ma soro onye okike. Maynwekwara ike idezi ma kesaa ndi enyi gi na ezinulo gi foto 3D ndi a site na ịbanye share akara ngosi mgbe ipesiri ihe onyonyo a ka ibudokwa na ihu ihu zuru ezu.
NDpMỌD # # 4: Mepụta foto 3D mbụ gị
Ọ dị oke mfe ịmepụta foto 3D nke gị na LucidPix. Buru ụzọ kpatụ akara ngosi igwefoto na ala nke ihuenyo ịgbanwe ka okike mode.
Otu oge iji kee, ị ga-egosiputa igwefoto ekwentị nke foto ndị na-adịbeghị anya ị nwere ike iji LucidPix gbanwee 3D, ma ọ bụ ị nwere ike ịhọrọ ịse foto ọhụrụ site na ịme ọpịpị akara ngosi igwefoto / acha anụnụ anụnụ na akuku aka ekpe na ihuenyo.
Iji mepụta foto ị weghara 3D, naanị pịa na foto, nke ga-ebugote onyonyo zuru oke. Ọ bụrụ na ọmarịcha foto ahụ, pịa ya N'ịwa 3D Photo Pịa ka eme ya 3D.
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịnwe foto 3D gị site na Pịa akara ngosi igwefoto n’elu aka ekpe nke igwefoto mpịakọta, na-agbapụ foto dị ka nke nkịtị.
Ọ bụghị na ihe dị mma? Lelee ederede post anyị banyere otu esi kacha mma ekewet 3D foto.
Ndụmọdụ # 5: Hapụ oghere n'akụkụ isiokwu nke foto gị
N'oge usoro ntụgharị 3D, a na-ese foto foto na ntakịrị, nke pụtara n'ọnụ nke foto nwere ike ilepụ anya. Anyị na-eme nke a ka ị nwee ike lee ihe onyonyo a anya n'ụzọ atọ niile. Mgbe ị na-ele anya, ihe ndị dị anya na-agagharị na ihuenyo karịa ihe ndị dị nso, yabụ ha chọrọ ọtụtụ ohere iji bulie akụkụ gaa n'akụkụ na ihu na-agbada, n'ihi ya. Ọ bụrụ na anyị emeghị nke a, ị ga-ahụ onu ihu foto mgbe niile.
Emela iwe! Dịka ị ga - eme na oghere ọhụrụ na igwefoto DSLR gị, ihe niile ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - agbapụ LucidPix bụ idepụta foto gị dịtụ iche. N'okwu a, tinyekwuo obere ohere n'akụkụ isiokwu gị. 'Ll ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị ga-eso naanị obere mgbanwegharị framing a.
Gbalịsie ike gbaa foto gị ka ọ dịghị ihe dị mkpa na mpaghara ọcha
ND #MỌD # # 6: Mee ya nke gị na LucidPix
LucidPix na-eme karịa imepụta omimi maka foto 3D, ọ na-enye gị ohere idezi ha iji mee ka ha bụrụ nke gị. Nlele site na ịtinye nzacha dị ka ọ dị na Instagram ịgbanwe foto na mmetụta nke foto ahụ, mee ka etinye ya na mgbakwunye Ederede 3D na emojis atop foto gi.
Nlele nke ederede 3D n’elu eserese 3D
Enwere ike ịhazi ederede 3D gị site na ịpịgharị na mbugharị iji mee ka ọ gbanwee, jiri mkpịsị aka abụọ wee tugharia ya, jiri otu mkpịsị aka na-atụgharị, na site na ịpị oval ojii. n'elu foto ịgbanwe font ụzọ.
Gbalia idobe ederede gi na emojis gi site na akuku onu nke foto a, ka usoro ntụgharị 3D na-echekwa obere akụkụ foto ahụ n'akụkụ nke ọ bụla.
Maka ama ndi ozo banyere ederede 3D, biko lee akwukwo post a.
NDpMỌD # # 7: Kekọrịta ihe okike gị
LucidPix bụ pro na-ekerịta foto 3D gị, na-enye gị nhọrọ ịkekọrịta dị mfe maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ohere ọ bụla. LucidPix na-akwado ịkekọrịta nyiwe ndị a ugbu a, na-eji ndị ọzọ n'ụzọ:
Facebook (dị ka nwaafo 3D foto)
Na mgbakwunye na nyiwe ndị a dị n'elu, LucidPx nwere ike ngwa ngwa na mfe mbupụ foto 3D gị dị ka vidiyo GIF na vidiyo mp4 maka ịkekọrịta na weebụ ma ọ bụ na mgbasa ozi mgbasa ozi ọ bụla.
Mgbe ị na-ekekọrịta, ị nwere ike họrọ etu esi gosipụta ihe okike 3D gị, gụnyere ọsọ na ụdị nke igwefoto si agagharị. Nwalee nhọrọ site na tapping n'etiti Orbit, Zoom, slide na Square ịhụ ihe kacha mma na foto gị, mgbe ahụ jiri ihe mmịfe ọsọ mee ka ije ahụ zuo oke. Ozugbo ị happyụrị ọ youụ, ịkwesịrị enweta Chekwaa vidiyo ịchekwaa ya na igwefoto gị.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ isoro ụwa kerịta ihe okike gị, were nwayọ nwayọ gaa n’aka ekpe mgbe ị na-ekekọrịta ma họrọ Ekekọrịta na osisi.
Họrọ Chekwa nhọrọ dị n'akụkụ aka nri ịkeere Osisi LucidPix.
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịkekọrịta ozugbo site na peeji nke ụlọ nke ngwa akpọrọ LucidPix Gallery. Ozugbo ahụ, kpatụ akara aka n’elu aka nri nke enyo iji kesaa ihe okike 3D gi na osisi.
Kpatụ akara ngosi mgbakwunye iji kesaa ihe okike gị
Mgbe ịpịchara akara ngosi osisi, ngwa ga-ebu ụzọ hụpere foto 3D gị, ya na ebe iji tinye nkọwa dị mkpirikpi. Dejupụta akụkụ a, wee jide n'aka na Ndị ọha na eze na-ahụ ya ahọpụtara nhọrọ, ka ndị ọzọ wee hụ ma kee ihe okike gị. Ozugbo ị pịa Post A ga-eziga onyinyo gị na LucidPix ka enyocha, wee tinye ya na foto peeji nke ụlọ maka mmadụ niile ka ha lelee, amasị ma kesaa.
Gbalia igbakwunye obere nkọwa ma mee ka ọha na-ahụ foto gị
Ozugbo ị pịa Post ị ga-ahụ obere kelee na ala nke enyo na-egosi ihe ịga nke ọma.
Nke 8: Nwee anụrị!
LucidPix bụ ihe niile gbasara ikpori ndụ na ịchọ ụwa na 3D. Ya mere, pụọ ebe ahụ ma nyere ụwa aka ihu ihe ị na-ahụ na foto 3D site na LucidPix!
Anyị na-atụ anya na ntuziaka mmalite mmalite a nyeere gị aka ibili na LucidPix na-eso. Ọ bụrụ na ị ka nwere ajụjụ ma ọ bụ ihe ị ga-ekekọrịta nzaghachi, biko nweere onwe gị iji nke anyị kọntaktị page ịbanye.
Ndụ foto dị na 3D →← Ndụmọdụ maka Nnukwu imalmụ anụmanụ